Fanomanana fiaraha-monina | Fiaretana haran-dranomasina
Alohan'ny hidiranao amin'ny tetik'asa miompana amin'ny fiompiana trondro eny amin'ny faritra amoron'ny haran-dranomasina dia zava-dehibe ny fanaovana scoping, drafitra, fanatrarana ary fiaraha-miombon'antoka mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny famokarana hazan-dranomasina, ny fiveloman-dranomasina ary ny fiarovana ny tontolo iainana haran-dranomasina. Ny fiompiana an-dranomasina amoron-dranomasina dia tokony kasaina sy tanterahina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitra eo an-toerana mba hanomezana lanja lehibe ny vondron'olona amoron-dranomasina ary hampihena ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana iankinan'izy ireo. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny mpiray antoka amin'ny fananganana fitokisana, fifandraisana ary fanampiana izay takiana amin'ny fitantanana mitohy. Ny fiompiana anaty rano dia sehatra iray izay mety misy karazana mpandray anjara maro samihafa tafiditra amin'ny fanaovana politika, ny drafitra ary ny fitantanana ilay hetsika. Ireo mpandray anjara dia mety ahitana mpahay siansa, tantsaha trondro, mpanjono, mpitsabo amin'ny famerenana amin'ny laoniny, tompon-trano, orinasa an-dranomasina, mpitantana, tompon'andraikitra amin'ny governemanta, mpampiasa fialamboly amoron-tsiraka, sns. ref
Ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena (FAO) dia namolavola lisitry ny fepetra hamaritana ireo faritra mahaliana an'ireo mpandray anjara manan-danja amin'ny alàlan'ny fomba ekiajika ho an'ny fiompiana na EAA. Ny famaritana ny sakana amin'ny fampiasana ny loharanom-pahalalana ankehitriny sy mety ho an'ny tontolo iainana an-dranomasina dia iray amin'ireo dingana tena ilaina amin'ny fitantanana ny fiompiana anaty rano amin'ny fomba maharitra sy tsy misy ady.
Famantarana ireo faritra mahaliana ny mpandray anjara mifandraika amin'izany. Loharano: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFao 2010manokatra fisie PDF
Ny fitantanana tsara ny fiompiana anaty rano dia misy ny fampiroboroboana ny maha-tafiditra, ny maha-ara-dalàna ary ny fandraisana andraikitra (FAO, 2010). Noho io antony io dia zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny mametraka fanontaniana sy mandre ny ahiahin'ireo vondrom-piarahamonina momba ny hoe na / na ahoana ny fomba hidiran'ny fiompiana anaty faritry ny haran-dranomasina.
Ireo fanontaniana ireo dia misy, saingy tsy ferana amin'ny:
Fanombanana ilaina amin'ny fiompiana anaty rano
Efa nahatsikaritra ny fihenan'ny jono ve ny mpandray anjara noho ny fanjonoana tafahoatra?
Moa ve ny mpanjono eo an-toerana nahatsikaritra ny fihenan'ny haben'ny trondro?
Moa ve ny mpanjono eo an-toerana nahatsikaritra ny fihenan'ny haben'ny trondro tsirairay?
Mila mahita toeram-panjonoana vaovao ve ny mpanarato eo an-toerana?
Manana olana amin'ny fiarovana ara-tsakafo ve ireo mpandray anjara?
Moa ve miankina amin'ny firenena hafa ny vondrom-piarahamonina / fanjakana / nosy / firenena amin'ny fanafarana proteinina?
Misy tsy fahampian-tsakafo ara-dalàna ve eo amin'ny fiarahamonina?
Misy ve ny filàna ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny fiarahamonina izay tsy tian'ny indostria hafa?
Misy ve ny tsy fahampian'ny asa eo an-toerana izay mety afa-po amin'ny fiompiana hazandrano?
Liana ve ny mpiray antoka hianatra bebe kokoa momba ny fiompiana anaty rano ho làlana ahazoana tombony amin'ny asa sy toekarena?
Misy olona eo amin'ny fiarahamonina maniry ny hanangana toeram-pambolena sy tetikasa fiompiana anaty rano? Raha eny, iza?
Karazan-java-maniry mety hambolena
Karazana inona avy no tompon-tany amin'ny faritry ny haran-dranomasina azo kolontsaina?
Misy karazan-trondro hazandrano be fangatahana fihinanana eo an-toerana?
Moa ve ny mpanjono eo an-toerana nahatsikaritra ny fihenan'ny tahiry ala any an'ireny karazana ireny?
Moa ve ireo mpandray anjara liana amin'ny fambolena ireo karazana any an-toerana mba hanamaivanana ny tsindry hazandrano tafahoatra ary hiteraka famatsiana tsy tapaka ho an'ny fanjifana na fanondranana any an-toerana?
Misy mpandray anjara ve manana traikefa amin'ny karazana fiompiana anaty rano?
Raha eny, karazana fomba inona no nampiasaina ary ho an'ny karazana inona?
Manana ny fahaiza-manao sy ny fahaizany miasa ve ny mpiasa eo an-toerana mba hitantanana sy hitantanana tranokala famokarana trondro?
Raha liana amin'ny fiompiana trondro ny mpiaramiasa, inona no fomba fambolena mety mifanaraka amin'ny tontolo iainana sy ny haavon'ny fahaizana manokana?
Afaka mahazo sambo ve ireo mpandray anjara?
Inona no fidirana amin'ny / fananana amin'ny tany sy ny tontolo iainana an-dranomasina ananan'ny fiarahamonina?
Misy mpandray anjara ve manana fidirana na fananana amin'ny tontolo iainana an-dranomasina izay afaka mampiantrano tranom-borona na penina?
Mahatakatra ny hevitra momba ny faharetana ve ireo mpandray anjara?
Manana ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fambolena amin'ny fomba maharitra sy mahasoa ara-toekarena ve ireo mpandray anjara?
Tsena sy fotodrafitrasa
Lafiny ara-toekarena amin'ny fiompiana anaty rano maharitra.
Raha vantany vao fantatry ny mpiray antoka fa mety ho karazana fambolena izy ireo, inona ny tsena ankehitriny?
Moa ve ny mpanjono mivarotra karazana voafantina ao an-toerana, iraisam-pirenena sa izy roa?
Inona ny vidiny eo an-toerana na iraisam-pirenena ho an'ireo karazana ireo?
Amidy feno ve izy ireo sa feno fonosana?
Eo akaikin'ny fitaterana ve ireo toeram-piompiana ary manana fahaizana ampy hahatongavana any amin'ny tsena?
Raha toa ka efa hitan'ny mpandray anjara ny toerana natokana ho an'ny tranom-borona, dia hatraiza ny tranomaizina amin'ny orinasa mpamokatra?
Hatraiza ny ozinina fanodinana hatramin'ny toerana fitaterana iray?
Inona ny fomba fitaterana?
Haingana toy inona no ahatongavan'ireo trondro amin'ny tsena?
Misy fiasa miasa ary mety azo zahana tohitohim-pamatsiana manomboka amin'ny tantsaha ka hatramin'ny mpividy hatramin'ny mpizara ho an'ny mpanjifa?
Misy fitahirizana rakitsoratra ve ahafahana mamantatra ny vokatra?
Misy mpandray anjara ve manana traikefa amin'ny fitahirizana firaketana sy ny fitadiavana? Raha izany, ahoana no fomba hampiasana ireo fahaiza-manao ireo amin'ny famokarana sy fivarotana hazandrano?
Iza no mifehy ny fiompiana anaty rano eo amin'ny faritra, distrika, faritany / fanjakan'ny firenena? (jereo Fitsipika hanohanana ny fitantanana maharitra pejy)
Raha vantany vao napetraky ny mpitantana iray hoe iza avy ireo mpandray anjara mifandraika amin'izany, inona no iahiany, ary raha velona ao anaty tranokala ny fiompiana dia mila mamaritra izy ireo ny fomba hifandraisany amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy ary hananganana hery sy fahalianana amin'ny fizotran'ny firotsahana. Ny mpitantana dia mety te-handinika ihany koa ireo sakana mety hisorohana ny mpandray anjara amin'ny fandraisana anjara sy ny fomba handresena ireo sakana ireo mba hanomezana fahafaha-miditra ireo mpandray anjara. Diniho ity tranga fianarana amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana anaty rano maharitra any Palau.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra momba ny fiompiana anaty rano: famolavolana politika sy fampiharana ny fampandrosoana maharitramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampiroboroboana ny fiompiana anaty rano: fanatodihana ny tontolo iainana amin'ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandraisana anjara amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanaovana politika, fandrindrana ary fitantanana ny politika